Ọ nweghị onye lanarịrị n'ihe mberede ụgbọelu An-12 na Russia dị na Siberia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Ọ nweghị onye lanarịrị n'ihe mberede ụgbọelu An-12 na Russia dị na Siberia
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Belarus • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọ nweghị onye lanarịrị n'ihe mberede ụgbọelu An-12 na Russia dị na Siberia.
Gọvanọ nke Irkutsk Oblast kwuputara na ndị niile nọ n'ụgbọ ahụ anwụọla, na ọ nweghị onye dị ndụ n'ime mkpọmkpọ ebe ahụ.
Ụgbọ elu Turboprop nke bụ́ An-12 nke ndị Soviet n'oge Soviet dara ma gbaa ọkụ na Siberia, Russia.
An-12 bụ ụgbọ elu turboprop nke oge Soviet mepụtara n'etiti 1957 na 1973, nke bụ isi maka ndị agha USSR.
Ihe ahụ merenụ bụ nke kacha ọhụrụ n'ọtụtụ ọdachi ikuku mere na Saịberịa na mpaghara ọwụwa anyanwụ Rọshịa.
Dị ka ndị ọrụ Russia na Moscow si kwuo, ọ dịkarịa ala mmadụ asaa nọ n'ụgbọ ahụ Antonov An-12 ụgbọ elu ibu nke dara Siberia, nso obodo Irkutsk.
O doro anya na ụgbọ elu ahụ bụ nke ụgbọ elu 'Grodno' nke Belarus ma na-eme ụgbọ elu ibu Siberia, Rọshịa.
"N'elekere 2:50 nke ehihie Moscow, ndị Otu-12 ụgbọ elu, na-efe efe n'etiti Yakutsk na Irkutsk, kwụsịrị na radar, "onye ọrụ Russia kwuru.
"Na mbụ, e gburu mmadụ abụọ ma ka amabeghị ọnọdụ mmadụ ise ọzọ."
Dị ka akụkọ mbụ si kwuo, a chọtara ebe ihe mberede ahụ na mpaghara obodo Pivovarikha (na mpaghara Irkutsk), na-adịghị anya site na ọdụ ụgbọ elu. Ụgbọ elu ahụ banyere n'okirikiri nke abụọ n'oge ọdịda wee pụọ na radar.
Dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe mberede Russia si kwuo, mgbe ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na ndị nnapụta rutere n'ebe ahụ, ụgbọ elu ya na-agba ọkụ, mana ndị ọrụ mberede ejirila meenyụ ọkụ ahụ.
Ekwuru na ihe karịrị mmadụ 100 na ụgbọ ala 50 nọ na saịtị ahụ ma nyere aka na ọrụ mgbake.
The Otu-12 bụ ụgbọ elu turboprop nke oge Soviet mepụtara n'etiti 1957 na 1973, nke bụ isi maka ndị agha USSR. Kemgbe ọtụtụ ụgbọ elu ndị nkịtị na Soviet Union na-arụ ya, bụ isi maka ụgbọ elu ibu.
Na 2019, otu Otu-12 dara n'akụkụ ọdụ ụgbọ elu Lviv dị na Western Ukraine, gbuo mmadụ ise ma merụọkwa mmadụ atọ ọzọ.
Ihe omume a bụ akara kacha ọhụrụ na nsonso ọdachi ikuku na Siberia na Russian Far East. N'ọnwa Julaị, ndị ọrụ mberede na-enyocha mpụ nke ụgbọ elu Antonov An-26 turboprop mara ọkwa na ha enwetala ozu nke ndị njem 22 na ndị ọrụ isii ka ọ dakwasịrị n'otu ugwu dị na peninsula Kamchatka.